Sawirro: Maamulka G/Banaadir oo dhulka dhigay dhismo sharci daro loo dhistay – Warfaafiye:
Sawirro: Maamulka G/Banaadir oo dhulka dhigay dhismo sharci daro loo dhistay
Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta burburiyay dhismo shirkadda ECO ay ka dhistay barxadda Piazza Libera ee degmada Xamar Jajab, kaasoo muran badan uu ka taagnaa sharci ahaantiisa.
Amar kasoo baxay Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa lagu burburiyay dhismaha Piazza Libera maadaama goobtaas ay tahay mid dan guud si loogu soo celiyo sideedii hore.
Duqa Muqdisho ayaa horay u hakiyay dhismaha goobtan, kadibna amray in baaritaan lagu sameeyo, iyadoo la fulinayo amarkii Madaxweynaha ee lagu joojiyay bixinta dhulalka danta guud.
Dhulka Piazza Libera ayaa waxaa la sheegay inay dhisaneysay shirkad kuwa qashinka ka qaada degmooyinka, waxaana qorshaha goobtan uu ahaa in lagu uruuriyo qashinka, taasoo dad badan ay walaac ka muujiyeen faya-dhowrka iyo caafimaadka goobtaas oo ku dhow goobo dad shacab degan yihiin.
Sawirro: Burcad si xeeladeysan dadka ugu dhici jiray Muqdisho oo lasoo qabtay
Ciidamada Mareykanka iyo kuwa DF oo ka baxay deegaanka Sanguuni